Iphupha malunga neLeaf Leaf Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Kwizobugcisa obuhle, igqabi lekhiwane lihlala lisetyenziselwa ukugubungela okanye ukufihla amalungu esini abantu abahamba ze. Olu setyenziso lubuyela kwimbali yeBhayibhile yokuwa. Kuba emva kokuba uAdam noEva besityile isiqhamo solwazi, babubona ubuze babo babugquma ubuze babo ngamagqabi omkhiwane.
Ngenxa yeli bali lebhayibhile, kubugcisa obubonwayo beChristian West ixesha elide, kude kube kumaxesha anamhlanje, amalungu esini abantu abahamba ze abhalwe ngegqabi lekhiwane okanye enye into ebekufanele ukuba iyabogquma.
Igqabi lomkhiwane linokusetyenziswa ngokufuziselayo. Rhoqo isetyenziselwa ukunika igama into ebekwa phambi komnye ukuyifihla. Injongo kukuba ukungacaci kokuziphatha kwabo akuqwalaselwa. Kodwa nokutshintsha kwezinto okanye isizathu esingeyonyani sinokukhankanywa kwisivakalisi esinegqabi lekhiwane. Ubeka ingubo, ngokungathi kunjalo, ngaphezulu kwesihloko oziva uneentloni ngaso.
1 Uphawu lwephupha «igqabi lekhiwane» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «igqabi lekhiwane» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «igqabi lekhiwane» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «igqabi lekhiwane» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi kuthathelwa ingqalelo, igqabi lomkhiwane ephupheni linokubhekisa kubumsulwa kwaye ukuthozama bhekisa kumphuphi. Ugcinwe kakhulu ebomini bakhe. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, uziva uthatha icala elithile kwiimvakalelo zakhe kwinqanaba lezesondo. Ke ngoko, lo mxholo wamaphupha unokuqondwa njengesimemo sokujongana nezi zithintelo.
Nabani na obumba igqabi lomthi ngesandla ephupheni lakhe kufuneka ajolise kwi Kuhlekisa qesha abanye abantu. Abo bachaphazelekayo banokulindela ukuhleba ebomini bokuvuka. Umbono wemifanekiso eqingqiweyo enamaqabunga omkhiwane aleleyo okanye imifanekiso emifanekisweni, efihla ubuze babo ngasemva kwayo, inokubonisa imeko yokuziphatha ephupheni.
Umfanekiso oqhelekileyo wephupha ngokunxulumana nophawu "lwegqabi lekhiwane", ngokutolikwa ngokubanzi kwamaphupha, uAdam enegqabi lomkhiwane kunye noEva enenyoka esinqeni sakhe kumyezo wase-Eden. Ukuba umntu oleleyo uphupha ngale meko yephupha, kuya kuba njalo i sigqibo ukuba nefuthe kubomi bokwenyani ngokuswela ukholo kunye nenkohliso.
Ukuba isimboli yephupha "igqabi lekhiwane" livela ngokufuziselayo, oko kukuthi, njenge-alibi okanye imbumbulu ephupheni, uhlalutyo ngokubanzi lweli phupha liza kulithatha isimanga esibi yenzelwe umntu ophuphayo. Kuya kufuneka uzilungiselele izehlo ezingathandekiyo kwi el mundo yabalindi.
Kweli nqanaba lokutolika, kunokuba yinto enomdla ukuba yeyiphi na umntu othethelayo ephupheni. Kungenxa yokuba unokufumana ulwazi ngakumbi koku. Ngaba yayingumphuphi ngokwakhe okanye iqabane lakhe? Abanye abantu abakwindawo ekufutshane nabo banokucinga.
Uphawu lwephupha «igqabi lekhiwane» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba lengqondo lokuchazwa kwephupha, uphawu lwephupha "igqabi lekhiwane" lisetyenziswa njengentetho ye ubunyulu ndabona neentloni. Kwakhona, umyalezo unokufihlwa emva kwephupha kangangokuba iphupha lifuna ukufihla into eneentloni ngayo.
Ukuba amagqabi omkhiwane abonwa kumasebe omthi womkhiwane, mhlawumbi nangamakhiwane, ephupheni umntu ophuphayo udla ngokufumana isilumkiso ngaphambi kokuphazamiseka kunye nokungakhathali.
Uphawu lwephupha «igqabi lekhiwane» - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha "igqabi lomkhiwane" njengenxalenye yomkhiwane ibonwa kutoliko lokomoya njengophawu lokuvelisa nokwamkela. Kwakhona, iphupha elinjalo linokukhokelela kwinzulu. ukuqonda ngokomoya bonisa ukuba yeyiphi ngoku enikwa umntu ophuphayo.